Madaxweyne Xassan Sheekh oo warbixin ka dhageystay guddiyo loo saaray xaalada abaarta – idalenews.com
Muqdisho(INO) – Madaxweynaha dowladdda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud oo ay wehliyaan hogaamiyayaasha madasha-wadda-tashiga ayaa kulan wada jir ah la qaatay xubno ka tirsan guddiyo loo saaray in ay qiimqeyn ku sameeyaan xaalada abaarta ka jirta qeybo badan oo ka mid ah dalka.
Madaxweynaha ayaa warbixin gaar ah ka dhageystay xubnaha guddiyada ah oo ay ku jiraan, guddiga abaaraha, guddiga u adkeysiga aafooyinka iyo xubno ka socday dowlad gobolleedyada dalka ka jira, iyaga oo sheeegay in abaarta ay u muuqto mid ku sii baaheysa gobollo cusub, sidaa daraadeed muhiim tahay in sidda ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto.
Madaxweyne Xassan Sheekh ayaa gudiyadan uga mahad celiyay shaqada ay soo qabteen, isaga oo intaa ku darray in dhawaan wadajir loo soo saari doono baaq caalami ah oo la xiriira xaalada abaarta, iyadoo la dhisayo guddi heer Qaran ah oo abaabula gurmadka loo baahan yahay.
Ugu danbeyntii, xaalada abaarta dalka ka jirta, ayaa aad looga deyrinayaa, waxaana laga cabsi qabaa haddii aan si deg deg ah wax looga qaban in ay noqoto mid la mid ah abaartii dalka ka dhacday sanandkii 2011-ka oo kale.
Gobollada dalka qaarkood wararka ka imanaya ayaa sheegaya in jiraan dad is daldalay kadib markii ay dhaafeen dhamaanba xoolihii ay dhaqanayeen.